Laser Cutting Isikhumba for Shoes Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Cutting Isikhumba ngoba Shoes Imboni
Laser GOLDEN eba CO₂ ekhethekile laser umsiki ngoba isikhumba.
Isikhumba & Shoes Imboni Isingeniso
Esikhathini lesikhumba izicathulo umkhakha, oda ifektri zisekelwe ezimakethe kanye ukudliwa imikhuba ekupheleni yomsebenzisi. Nge ukukhula kwesidingo imikhiqizo uqobo, oda yokukhiqiza ziphendukile e ezihlukahlukene futhi amaqoqwana encane, okudinga namafemu kwezidingo esifike ngesikhathi ukufinyelela "imfashini okusheshayo" mkhuba.
Isikhumba & Shoe Imboni Isimo
01 Umkhuba wokulala ezihlakaniphile yokukhiqiza
02 oda e ezihlukahlukene futhi encane ubuningi
03 Labor izindleko ziqhubeka nokwanda
04 Izinto abiza ukugcina okwandisa
05 Inkinga Environmental
Kungani laser cutting ubuchwepheshe ilungele lesikhumba izicathulo ukucubungulwa?
Kuqhathaniswa izinhlobo bendabuko ezahlukene ukusika izindlela (ngesandla, ummese ahlabayo noma isibhakela), laser has izinzuzo ezisobala isivinini ngokushesha, okwenza ukusetshenziswa impahla, non-contact ukucutshungulwa ukunciphisa umonakalo ebusweni lesikhumba izinto, ukulondoloza zabasebenzi kanye nokunciphisa udoti. Lapho ukusika isikhumba ngaphakathi, laser iyancibilika indaba, okuholela imiphetho ehlanzekile uphawu kahle.
Laser GOLDEN - The ejwayelekile CO2 laser umsiki ngoba isikhumba ahlabayo / izicathulo esikhiqiza
Amakhanda ezimbili ezihambayo ngokuzimela - Cutting imiklamo ezahlukene ngesikhathi esifanayo
Model: XBJGHY-160100LD II
ikhanda Independent ezimbili
Multi-inqubo: ahlabayo, scribing, athula ukuhlanganiswa
ukuzinza eqinile, operation lula
Okuningi mayelana wokusika laser
Laser ahlabayo kufanelekile cutting of ezincane-umthamo ngezifiso imikhiqizo lesikhumba.
Ukukhetha laser esingakulethela:
a. Ngokunemba High ahlabayo izinga
b. Izitayela eziningi iphethini design
c. Ngokwezifiso imikhiqizo
d. High kahle
e. Quick Ukusabela
f. ukulethwa Fast
Shoe umkhakha funa Ⅰ
"Fast imfashini" kancane kancane ingena esikhundleni "izitayela abavamile"
Laser ahlabayo izinto zobuchwepheshe ezingasetshenziswa ngayo ngokugcwele nezidingo ukusika ezincane-umthamo, multi-ezihlukahlukene kanye ne-multi-isitayela izicathulo umkhakha.
Laser ukuzisika akuwona ukucutshungulwa efaneleka kakhulu yokwenza izimboni nezicathulo lapho nenza oda egcizelele izitayela ezihlukahlukene, amaphethini kanye nobungako ezahlukene isitayela ngamunye / iphethini.
Shoe umkhakha funa Ⅱ
Intelligent ukuphathwa ngenqubo ukukhiqizwa
Shoe umkhakha funa Ⅲ
Exhaust ipayipi isikimu jikelele
Ukugubha ujule izimboni, nokuhambisa futhi ehlakaniphile laser isicelo izixazululo ukusiza abasebenzisi ukusungula nokuthuthukisa.